Global Voices teny Malagasy » Ao Meksika, fandaharanasa fanavotana tsy ampy hampihibohana ireo 30 tapitrisa miasa amin’ny sehatra ivelan’ny rafitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2020 7:02 GMT 1	 · Mpanoratra Anette Eklund Nandika (en) i Alexis Faber, avylavitra
Sokajy: Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vonjy Voina, COVID-19
Mpivarotra roatran-tsavony. Sary an'i albertozero_7 /Pixabay . Lisansa Pixabay. 
Miaraka amin'ireo olona maherin'ny 30 tapitrisa miasa amin'ny sehatra ivelan'ny rafitra , sarotra amin'ny maro ny hanatanteraka ny elanelana ara-tsôsialy ao Meksika. Na nandray fepetra fanavotana aza ny governemanta, maro no mahita izany ho ‘tsy ampy’, ary nanipika ny zavamisy hoe “tombontsoan-tsaranga” ihany ilay fanibohana
Ao Meksika, ny fanibohana, ny mampiasa ny tokantrano ho toy ny “birao”, ny fanasàna tsy tapaka ny tànana, dia tombontsoan-tsaranga. Ao amin'ny firenenay, mihoatra ny 30 tapitrisa ireo Meksikàna miaina ny isanandrony. Noho izany, tsy afaka ny hampiato ny toekarena ianao satria rehefa tsy miasa izy ireny dia tsy misakafo.
Ny 31 Martsa, nisy fepetra fanalefahana amin'ny ampahana sy an-tsitrapo nambara  manoloana ny ady amin'ilay valanaretina. Tamin'ny fotoana nanaovana ity tatitra ity, nisy 15.529 ireo tranga voamarina ho  COVID-19 tao Meksika, 1.434 ny maty ary 9.086 no sitrana.
Mifanaraka amin'ireo fepetra ara-pahasalamàna dia natsahatra ireo asa izay mbola azo leferina. Hita anatin'ireny fepetra sasany ireny ny tsy fahafahana mivorivory mihoatra ny olona 50, ny fanasàna tànana matetika ary ny tsy fifampikasohana ara-batana rehefa mifampiarahaba. Nisy ihany koa ny fanentanana tamin'ny fomba ofisialy mba handrisihana ny fampiharana ny elanelana ara-tsôsialy, izay naparitaka tamin'ny alàlan'ilay tenifototra #QuédateEnCasa  (#MijanonàAntRano).
Mihoatra ny 30 tapitrisa ireo miasa amin'ny sehatra ivelan'ny rafitra
Ao Meksika, araka ny angondrakitra  ofisialy navoaka tamin'ny 2019, avy amin'ny Ivontoeram-pirenena momba ny Antontanisa sy ny Jeografia (INEGI), olona 30,8 tapitrisa no miasa anatin'ny sehatra ivelan'ny rafitra ary 15 tapitrisa amin'ireo olona ireo no miasa tsy mitambatra anaty orinasa. Izany dia entina milaza fa anaty sehatra tsy manara-drafitra ry zareo no miasa miaraka aminà fitaovana izay nentiny avy any an-tranony. Misy amin'ireny ny mpanampy an-trano, tantsaha, mpandraharaha madinika, mpampianatra miasa tena, mpivarotra amoron-dàlana, ary mpivarotra.
Araka ny tatitra iray tamin'ny 2014 avy amin'ny Fikambanana Erantany momba ny Asa (OIT), efa ho 60 isanjato  amin'ireo Meksikàna no miasa ivelan'ny rafitra. Ho azy ireny izay miasa ivelan'ny rafitra, dia na sarotra na tsy azo tanterahana ilay hafatrafatra ankapobeny hoe “Mijanòna an-trano”.
Na misy olona iray avy amin'ny sehatra tsy manara-drafitra aza manohy miasa mandritra ilay valanaretina, azo antoka fa tsy ho ampy azy hiantohana ny filàny fototra raha ny karama azony. Araka ny angondrakitra  nozarain'i Rogelio Gómez Hermosillo, mpandrindra ny Hetsiky ny Olompirenena Hanoherana ny Fahantrana , tsy manana akory fifamatorana arak'asa ny 25 isanjaton'ireo mpiasa karamain'ny orinasa iray.
“Mpivarotra amoron-dàlana.” Sary avy amin'i iber34/Pixabay . Lisansa Pixabay .
Ireo mpivarotra amoron-dàlana ao Meksika, mivarotra “tacos”, fitafiana na zavapisotro, dia miteny fa ireo polisy mpandrava korontana no nanisaka ireo mpiasa hiala tamin'ny latabatr'izy ireo. Nora sy Venancia, samy mpivarotra, nilaza tamin'ny Deutsche Welle  (DW) tany am-piandohan'ny Aprily fa “ery amin'ny tendro farany ery ireo polisy mpandrava korontana (…) ary rehefa manatona ry zareo, mangorona entana sy miezaka miafina izahay.”
Tanaty tatitra iray vao haingana, Roger Gomis, mpahay toekarena miasa miaraka amin'ny OIT, nilaza hoe “tena zavadehibe ny mandrafitra fandaharanasa manokana ho an'ireo mpiasa ireo, indrindra fa amin'ny fandefasana vola mba hamonoany ny banga amin'ny karamany, nefa koa mba hiantohana izay filàny fototra.”
Drafitra ara-toekarena ve?
Taorian'ny herinandro vitsivitsy nisalasalàna, ny 6 Aprily dia nanambara drafi-panarenana ara-toekarena iray  ny governemanta federaly meksikàna. 25.000 pesos no hatolotra (mihoatra kely ny US$1,000), amin'ny endrika fampitrosàna, ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany, na anaty sehatra manara-drafitra izy na tsia.
Nambaran'ny filoha Andres Manuel Lopez Obrador fa ny governemanta dia “hitady fomba tsotra nefa malaky hitsinjaràna” azy ireny amin'ny alàlan'ny banky amin'ny fiandohan'ny May, ary ny hany antoka  takiana amin'ilay fampindramana dia ny “teny [nataon'ny governemanta].” Aorian'ny telo volana amin'ilay fampindramana voalohany, hahazo 850 pesos ireo orinasam-pianakaviana miisa iray tapitrisa, eo amin'ny 35 US dolara isambolana, mandritra ny telo taona.
Raha toa ho fanampiana an'ireo fandraharahàna madinika sy salantsalana izany, mihoatra ny 30 tapitrisa ireo vahoaka miankina amin'ny asa ivelan'ny rafitra.
“Ireo hisitraka ny fanampiana dia hofantenana avy amin'ny fanisàna nataon'ny governemanta misy mpisoratra miisa 5 tapitrisa,” hoy ny Infobae, ary “ireo olona mpanao fandraharahàna madinika izay nahazo alàlana dia hahazo antso an-telefaona” mba hanatona masoivohonà banky.
Alohan'ny haha-ofisialy ilay drafitra ara-toekarena, nitatitra ny DW  fa mety ho sarotra ho an'ny mpiasa maro avy amin'ny sehatra ivelan'ny rafitra ny hahazo ilay hetsika ataon'ny governemanta. Nokianina  ho “tsy ampy” ilay drafitra ara-toekarena, araka ny fijerin'ireo sendika marobe avy amin'ny fandraharahàna
Ny 21 Aprily, neken'ireo manampahefana ao Mexico City ny hanatevenana indray mandeha 1.500 pesos ($62) an'ilay fanampiana  ho anà mpiasa 4.264 ao Mexico City. Kanefa mila manaporofo  ireo mpiasa hoe tena voasoratra ara-dalana tokoa fa mpiasa tsy mpandray isambolana izy ireo talohan'ny 23 Martsa 2020, na monina ao Mexico City. Saingy marobe amin'ireo mpiasa ivelan'ny rafitra no mivezivezy mandalo  avy any amin'ny faritra manodidina ny renivohitra, araka izany dia tsy hahavita hanana fanamarinam-ponenana
Veronica, izay mitantana toerampivarotana iray ao Mexico City, nilaza tamin'ny Omnia, media ao an-toerana, fa “milaza ho mitondra fanampiana ry zareo ao amin'ny governemanta, nefa mitaky zavatra betsaka tsy vitan'ny olona tanterahana.”
Drafitry ny governemanta ihany koa ny hanohy ny fandaharanasa fiahiany ara-tsôsialy sy ilay asa fanorenna miteraka resabe “Mayan Train”  ary fotodrafitrasa maro hafa hiteraka fananana asa.
Araka ny tatitra iray hafa avy amin'ny InfoBae , ” tamin'ny faran'ny volana Martsa, nilaza ny fikambanana iray ahitàna mpivarotra amoron-dàlana miisa 5.000 ao afovoan-tànana manatantaran'i Mexico City fa mety hanome 6.000 pesos ($250) ho an'ny mpivarotra tsiraiiray izy ho fandrisihana azy ireo hihiboka an-trano, ary nokianiny ny governemantan'ny tanàna ho tsy mitondra fanampiana misimisy kokoa.”
Hatreto aloha, mbola manohy miasa ireo olona avy amin'ny sehatra ivelan'ny rafitra. “Tsy afaka ny hiato aho,” hoy i Leonardo Meneses Prado, mpivarotra hamburger eny an-tsisin'ny arabe ao Mexico City, tamin'ny New York Times . “Raha tsy mivarotra aho, tsy mihinana. Tsotra kely izany.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/04/30/148022/
 olona maherin'ny 30 tapitrisa miasa amin'ny sehatra ivelan'ny rafitra: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_05.pdf
 ireo tranga voamarina ho: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/mexico/
 efa ho 60 isanjato: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_245889.pdf
 Hetsiky ny Olompirenena Hanoherana ny Fahantrana: https://frentealapobreza.mx/wp/
 nilaza tamin'ny Deutsche Welle: https://www.dw.com/en/coronavirus-in-mexico-street-vendors-agonize-over-health-or-livelihood/a-52982543
 nilaza hoe : https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52220090
 drafi-panarenana ara-toekarena iray: https://expansion.mx/economia/2020/04/06/gobierno-destinara-creditos-a-pymes-formales-e-informales
 hany antoka: https://www.forbes.com.mx/amlo-anuncia-creditos-de-25000-pesos-para-pequenos-negocios-ante-coronavirus/
 1.500 pesos ($62) an'ilay fanampiana: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/como-tramitar-el-apoyo-para-trabajadores-no-asalariados-en-cdmx-ante-covid-19
 mila manaporofo: https://lasillarota.com/dinero/que-es-el-apoyo-emergente-para-trabajadores-no-asalariados-por-covid-covid-19-coronavirus-pandemia-fase-3/383762
 mivezivezy mandalo: https://lasillarota.com/dinero/urgen-apoyo-a-trabajadores-del-sector-informal-covid-19-coronavirus-pandemia-cuarentena/386095
 nilaza : http://www.omnia.com.mx/noticia/139238/asi-viven-al-dia-miles-de-trabajadores-informales-en-mexico
 Mayan Train”: https://www.aljazeera.com/news/2019/12/mexico-holds-assemblies-controversial-maya-train-plan-191214192247513.html